"ခရစ်တော်ကတည်းကကျင့်သုံးဤသည်မှာသညျယရှေုခရစျ၏အကြီးမားဆုံးသောအရှက်တစျဦးဖွစျသညျဒါဟာမတရားသဧဝံဂေလိတရားကိုပမာဏအဆိပ်သင့်စေဖြစ်ပါတယ် - ။ ။ ပင်တရုတ်, အာဖရိကနဲ့ကမ္ဘာတလွှားကဒါဟာတစ်ဦးအမေရိကန်ယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရားဖြစ်ပါတယ်တီထွင်ခြင်းနှင့်ကြွယ်ဝတဲ့အမေရိကန်သာသနာပြုအရာ၌နဲ့သင်းအုပ်ဆရာအားဖြင့်ပြန့်နှံ့ Rich ။ "
သငျသညျဘုရားသခငျ၏လူတို့တွင်ယနေ့ဆွီဒင်နိုင်ငံတူအဘယ်အရာကိုကျော်စိတ်မနာစေ? သတို့သမီး၏ပီတိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးချက်အဘယ်မှာရှိသနည်း တစ်ခါတစ်ရံထိုသို့ယရှေုသညျကျောလာကြလိမ့်မည်ထက်ခရစ်ယာန်တွေအများစုအန္တိခရစ်ထင်ရှားတဲ့ပိုပြီးအာရုံစိုက်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ပုံရသည်!
သငျသညျယရှေုကိုလာရန်အဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား သင်နောက်ဆုံးကြားလျှင်လက်ဝါးကပ်တိုင်, 1886 ၏ဆွေးနွေးချက်?
ယခုတွင်သင်သည်သူ, ယုံကြည်ခြင်းအားလှုပ်ရှားမှုအကြောင်းကိုရေးသားခဲ့ရာဒါဝိဒ်သည် Wilkerson အကြောင်းကိုအနည်းငယ်စာဖတ်ရ။
တို့က ဒါဝိဒ်သည် Wilkerson
ဇေဖနိ 3: 18- ဓမ္မပွဲထိုသူတို့အဘို့ဝမ်းနည်းနေသောသူများသည်ငါအရှက်၏အဘယ်သူကိုဖို့ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုး, သင့်နေသောသူတို့ကိုကိုစုသိမ်းရလိမ့်မည်။ (1917)
ဤသည်ဇေဖနိတစ်ဦးကို dual အနာဂတ္တိပါပဲ။ သူတို့ကအစ္စရေး၏သားသမီးများနှင့်အတူဒါပေမယ့်လည်း (နောက်ဆုံးသောကာလ၌ယေရှုခရစ်တော်၏အသင်းတော်ဖြစ်၏) ကိုဝိညာဏအဇိအုန်တောင်ပေါ်မှာအတူလုပ်ဖို့ရှိသည်။ ပထမဦးစွာအပေါင်းတို့၏, သူယုဒလူတို့သည်ရန်ပြောသော - ဘုရားသခငျသညျအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားအတူတကွဆောင်ကြဉ်းမယ်လို့ - ဒါပေမဲ့သူသာအစ္စရေး၏စိတ်ဆင်းရဲအခွအေနေအဘို့ကျိုးနှလုံးခဲ့တဲ့သူတွေကိုဆောင်ခဲ့ပြန်မယ်လို့ - ဘုရားသခင်၌သွားသမျှသောကြောက်မက်ဘွယ်သောအမှုအရာ - သူသည်အရှက်ကိုဘှားမွငျသောသူအပေါင်းတို့ကိုမှတ်မိလိမ့်မယ် အိမ်သူအိမ်သား။ ထမ်းရသောဝန်ကိုထမ်းသောသူတို့အား, သူကပြောသည်; "ငါသည်သင်တို့ကိုစုဝေးစေမည်။ " သူကသူတို့ကိုအကြီးအကတိတော်များကိုပေး၏
ဒါကအနာဂတ္တိလည်းနောက်ဆုံးသောကာလ၌ယေရှုခရစ်တော်၏အသင်းတော်ကိုမှကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေပါတယ်။ ဓမ်မဟောငျးကမျြးတှငျ, ဣသရလေအမြိုးသားတို့ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးပွဲခံရန်ဟုခေါ်ကြသည်။ အဋ္ဌမနေ့၌ - အဘို့ဓမ္မစည်းဝေးတောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဘေးဖယ်အခြားအရာအားလုံးဝတ်နှင့်သူတို့၏ကောင်းကင်ခမည်းတော်ကိုးကွယ်နှင့်ကိုခြီးမှမျးအာရုံစိုက် - ဒါဟာသူတို့အတူတကွတွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းထို့နောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျမ်းစာ၌ says: "အဋ္ဌမနေ့တွင်သင်သည်ဘို့ဓမ္မစည်းဝေးရကြမည်။ " ထိုပွဲသို့စုဆောင်းမှုဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုတွေ့ဆုံရန်ရှိသောအသင်းတော်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ရွေးချယ်ခွဲ ထား. ဓမ်မဟောငျးကမျြးကိုကိုယ်စားပြုတယ်။
ဤသည်နောက်ဆုံးသောကာလ၌ယေရှုခရစ်တော်၏အသင်းတော်ဖြစ်၏။ ဇေဖနိအဆိုအရ, နောက်ဆုံးသောကာလ၌ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်အရှက်ခံရဖို့။ ဒီမှာဟီဘရူးစကားလုံးက "အရှက်ကွဲခြင်းနဲ့အရှက်တကွဲအကျိုး" ကိုဆိုလိုသည်။ ဒါဟာအရှက်ကွဲခြင်းဖြစ်နှင့်ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်ရှုတ်ချကြ၏ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့သည်ထိုအယူဖောက်ပြန်အကြောင်းကိုလစ်ဘရယ်ခေတ်သစ်ဘုရားကျောင်းပြောနေတာမဟုတ် - သခင်ဘုရားတရားစီရငျ၏နေ့တွင်သူသည်ရှိသောအသင်းတော်နှင့်တကွကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ ကျနော်တို့ထိုသူတို့အဘို့ဆုတောင်းပဌနာနိုင်ပေမယ့်ကျနော်တို့တကညီလာခံမဟုတ်ကြောင်းကြောင့်ပေါ်မှာငါတို့မျက်ရည်ကျမဖြုန်းတီးသင့်ပါတယ်။
ဘုရားသခငျသညျညညျးတှားနှင့်ယခုကာလ၌ယေရှုခရစ်ဘုရားကျောင်းဖွံ့ဖြိုးသောအရှက်အဘို့ငိုကြွေးချင်သူတစ်ဦးကလူကိုရှာဖွေနေသည်။ ငါပင်တေကုတ္တေမှာမွေးဖွားခဲ့သောဘုရားကျောင်းအကြောင်းပြောနေတာပေါ့။ ငါပေါလုအားမွေးဖွားခဲ့သည်ကြောင့်ဘုရားကျောင်းနှင့်တမန်တော် '' သင်ကြားမှုအကြောင်းကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်။ အုပ်ချုပ်ဖို့သညျယရှေုခရစျ၏အမှန်တရားတှငျမှေးဖှားခဲ့သညျအသငျးတျော။ အဆိုပါမွေးဖွား-နောက်တဖန်ဘုရားကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုအောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ညီလာခံနှိမျ့ခ။
ဘုရားသခငျသညျဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုညီလာခံကြူးကျြောနေစဉ်တွင်အားဖြင့် idly ထိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းအကျန်အကြွင်းကိုရပါလိမ့်မယ် - ဒါဟာအရှက်, အရှက်ကွဲခြင်းနဲ့ကဲ့ရဲ့ရာဖြစ်သောဤအကာလ၌ဘုရားသခငျသညျဤအညစ်ညမ်းမှုညည်းတွားငိုကြွေးကြလော့မည်သူတစ်ဦးသည်သန့်ရှင်းသောအကျန်အကြွင်းကိုငါပေါ်ထွန်းစေမည်အကြောင်းပရောဖက်ပြုထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင့ says: "ငါသည်ကောင်းတစ်ဦးဘဝအသက်ရှင်ရန်အကြောင်းအရာဖြစ်နှင့် quacks နှင့်ငွေအရူးမိစ္ဆာပရောဖက်လျစ်လျူရှုမည်မဟုတ်သူတစ်ဦးကလူသညျဘုရားသခငျ၏အိမျသို့ လာ. အရာခပ်သိမ်းကိုဖကျြဆီးခွငျးရှိပါလိမ့်မယ်။ "
ဘုရားသခငျသညျဤအကျော်စိတ်မနာစေသူတစ်ဦးကလူကိုစုသိမ်းမည် - သင်အမှန်တကယ်သခင်ဘုရားကိုချစ်နှင့်သူ၏ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းကိုချစ်မိလျှင်, ဒီနေ့သင်ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကိုကြည့်လို့မရပါဘူး (နှင့်ငါနာမဖြင့်မှထိုအအရှက်ဖော်ပြထားခြင်းပါလိမ့်မယ်) ။ ဒီအရှက်အကြောင်းကိုပြောပါရန်ရှိသည်အဘယ်အရာကိုကြားနာပြီးနောက် "ဘုရားကျောင်းကနေအိမ်ပြန်လမ်းလျှောက်ပြောနိုင်ငါမဿဲ 18 ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ဘာမှတွယ်ကပ်နေလျှင်ငရဲတံခါးစည်းဝေးပွဲမှတက်မခံမရပ်ရကြလိမ့်မည်, ငါ, ငါ့အကြောင်းကိုဘုရားသခင့စိတ်မပူပါနဲ့မည်မဟုတ် ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာအရာအားလုံးကိုရှိပါတယ်။
ဒါဟာမလုံလောက်သေးပါ။ ဘုရားသခငျကလူကိုအသုံးပြုသည်။ ဘုရားသခင်ကသူ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့လူတွေအသုံးပြုသည်။ သူကကောင်းကင်တမန်တို့ကိုမပို့ပါဘူး။ ကောင်းကင်တမန်များကငိုကြွေးကြလော့, ဒါပေမယ့်ဘုရားသခငျသညျ၎င်းငျး၏ရည်ရွယ်ချက်ပြီးမြောက်ရန်ကောင်းကင်တမန်များမသုံးပါဘူး။ သူကကျိုးနှလုံးသားများနှင့်ဝန်နှင့်အတူယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုအသုံးပြုသည် - ။ တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်း, တံခါးနားမှာသညျယရှေုဖြစ်ပါတယ်။ သခင်ဘုရား၏နေ့အနီးမှာရှိ၏။
အကွီးအကဲမြားနိုး။ ဓမ္မဆရာများနှိုး။ သိုးထိန်းတို့သည်နိုး။
ချာ့ချ်ပေါ်တွင်မြင်ကွင်း။ အဆိုပါကောက်ရယူလိုက်ပါ။ ကဝတ်ဆင်။ အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘို့ဓမ္မစည်းဝေးအရှက်၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးအပေါ်ယူမလဲ မကောင်းတဲ့အမြိုးအနှယျကိုစိုက်ပျိုးထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်ယောလ "ဟုပြောသည်။
တစ်ဦးကယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရားညှိုးနွမ်းစေရန်မျက်မှောက်၌အရာအားလုံးရရှိသွားတဲ့ကြောင်းကိုဟောပြောကြ၏။ အရာအားလုံးအစိမ်းရောင်နှင့်ဘုရားသခငျ့စင်ညှိုးနွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးအနွယ်ကိုဘုရားသခငျ၏တစင်ကြယ်သောအမိန့်တော်ကိုနားထောင်မှ ruttet- လူတွေငတ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမ Meadows ရှိပါတယ်။ ဝက်အစုသည်စွန့်ပစ်နှင့်ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေပါတယ်။ အဆိုပါမြစ်များထွက်ခန်းခြောက်။ တစ်ဦးကထူးဆန်းတဲ့မီးဓမ္မဆရာများလောင်နေပါတယ်။ ယေဇကျေလသိုးထိန်းကောင်းကိုလယ်ကွင်းချနင်းနှင့်ကိုယ်အဘို့ကိုအကောင်းဆုံးကိုစားကြသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ ယနေ့သညျယရှေုခရစျ၏အသင်းတော်၌ဖြစ်ပျက်အရှိဆုံးရှက်စရာအမှုအရာကဘာလဲ?
ဤသည်ခရစ်တော်အားဖြင့်ကတည်းကကျင့်သုံးသညျယရှေုခရစျ၏အကြီးမားဆုံးသောအရှက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာမတရားသဧဝံဂေလိတရားကိုပမာဏအဆိပ်သင့်စေဖြစ်ပါတယ် - ပင်တရုတ်, အာဖရိကနဲ့ကမ္ဘာတလွှားက။ ဒါဟာတီထွင်ခြင်းနှင့်ကြွယ်ဝတဲ့အမေရိကန်သာသနာပြုအရာ၌နဲ့သင်းအုပ်ဆရာအားဖြင့်ပြန့်နှံ့ကာအမေရိကန်ယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရားသည်။ ချမ်းသာကြွယ်ဝ!
ဒါဟာဤမျှလောက်များစွာသောလူအခညျြအနှောနားမထောင်ခြင်းနှင့်သူတို့အပေါ်မှာငိုမပြုဘဲ, ဤစည်းစိမ်ချမ်းသာညီလာခံထဲကလာသောဗီဒီယိုများအားတွေ့မြင်နိုင်သည်ငါ့ကိုမိန်းမောတွေဝေစေသည်။ ဒါကအဆိပ်ကမ္ဘာအနှံ့ပြန့်နှံ့ခဲ့သည်။ ကျူးဘားဖွင့်လှစ်ရန်အကြောင်း, သူတို့ကသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုနှင့်အတူတစ်ကြိမ်ပေါ်ဧဝံဂေလိတရားကိုရသူတို့ကိုပြောပြရန်စိတ်အားထက်သန်နေကြတယ် "ဟုသငျသညျအလုံအလောက်ရှည်လျားသောအဘို့ဆင်းရဲသားတို့ကိုပါပြီဘုရားသခငျသညျအားလုံးကျူးဘားကြွယ်ဝတဲ့ဖြစ်သင့်လိုသည်။ "
ယခုတပတ်ငါဖြစ်သူ Kenneth Copeland ရဲ့အစည်းအဝေးတွေမှာမှတျတမျးတငျထားခဲ့တဲ့ဗွီဒီယိုတိပ်ခွေကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ငါစပီကာမှနားထောင်ပြီးအံ့အားသငျ့ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူငယ်ချင်းများကိုသင်တမန်တော်ပေါလုကသူတို့အယူမှားတမန်တော်ဖြစ်ဟုယုံကြည်သောသူတို့အထဲကအထောက်ပြကြောင်းတွေ့လိမ့်မည်, ဓမ္မသစ်ကျမ်းကိုဖတ်ပါ။ သူကသတိပေးခဲ့သည်နှင့်ထိုသူတို့၏အမည်များအသံထွက်။ ငါသည်သင်တို့ကိုငါအမှနျဆိုသညျကားအဘယျသို့နားထောငျကွ, ဒါပေမယ့်ညည်းတွားကြလျှင်, ထို့နောက်သင်သည်မျက်စိကန်းသောသင်ပြောပြပါ။ သငျသညျဝိညာဉျရေးရာမျက်စိကန်းသောဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျခဲယဉ်းနှလုံးသားများရှိသည်။ ပတ်ပတ်လည်တစ်ခက်ကိုလက်နက်နှင့်အတူတစ်ဦးကနှလုံးစင်ကြယ်သောဧဝံဂေလိတရားကိုကထိုးဖောက်မရနိုင်အောင်။ သင်ညာဘက်စိတ်တွင်မဟုတ်သောဤသည်ညီမျှမှုယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရားနှင့်အတူဒါပြည့်ဖြစ်လာကြပါပြီ။ သမ္မာတရားကိုသင်တို့အားတရားကိုဟောပြောလို့မရပါဘူး။ သူတို့နှလုံးသားများကျော်တစ်ဦးကိုလက်နက်ရှိသည်ကြောင့်သင်သည်ထိုသူတို့အရေးအသားအတွက်ဘာမှမပြနိုင်ပါ။ hard နှလုံးသားများ။
သင်တို့တွင်အချို့သောကြောင့်မခံမယူပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျ Copeland သို့မဟုတ် Hagin ရဲ့တိပ်ခွေနှင့်အတူသင်တို့၏ဝိညာဉ်ထဲသို့ဝင်ခဲ့ကြပါလျှင်, သင်အဘယ်သို့ကြားနာရသည်ကိုကြိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သူငယ်ချင်းများ, ငါသည်သိုးထိန်းဖြစ်၏, ငါသည်ဘုရားသခင့ဖြင့်သင့်ကိုခေါ်ပြီ။ ငါသည်ဤဘုရားကျောင်းကတိပေးပြီ။ ကျွန်တော်သိုးစုကိုခိုးယူဖို့လာသောသိုးရေကိုခြုံဝံပုလွေကိုမြင်လျှင်နေသမျှကာလပတ်လုံးကျနော်တို့ကဒီ rostrum ပေါ်မှာရပ်အဖြစ်, ငါတို့သည်ထရပ်များနှင့်ဆူညံအော်ဟစ်သငျ့သညျ။ ဒါဟာအကြောင်းကိုတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ကိုသင်မှတက်ပါတယ်။ ငါသည်ဤရက်သတ္တပတ်ထိုင်ညီလာခံမှာစပီကာမှနားထောင်ပြီးကျွန်မအံ့အားသင့်ခြင်းနှင့်နာကျင်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးကအရှင်၏ဒုက္ခဆင်းရဲအကြှနျုပျကိုကျော်လာ၏။ ငါသည်ဤသတင်းစကားကိုဟောပွောဒါကြောင့်ပါပဲ။ ကျော်ညည်းတွားကြ။
ငါကလည်းဘာစကားလုံးများအတွက်စကားလုံးကိုးကား။ အဆိုပါစပီခဲသောကွောငျ့ချီ လာ. နှင့်၎င်းတို့၏အိတ်ကပ်ထဲမှာပိုက်ဆံသွင်းထားသူကိုလူအပေါငျးတို့၏ချောစကားပြောဆိုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သငျသညျကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရချင်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကလုပ်ပေးအကြောင်းပြချက် "ထွက်လာပြောထားပြီးကြောင်းအသစ်တခုအယူဝါဒဖြစ်တယ်, ဒါသူတွေအများကြီးသူ့ကိုသူတွေအများကြီးရရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အရှိဆုံးမင်္ဂလာဧဝံဂေလိဆရာသို့မဟုတ်သင်းအုပ်ဆရာကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်ပါတယ် သူကသူ့ထံမှယူပါလိမ့်မည်ဖြစ်ပါတယ်ပင်ဘာအနည်းငယ်သာ။ သငျသညျအမြားဆုံးမင်္ဂလာအောင်မြင်မှုကိုတရားဟောဆရာရှာပြီးသူ့ကိုပိုက်ဆံပေး, သင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုလာသတည်း။ သငျသညျအမြားဆုံးမင်္ဂလာနေသောသူတို့အားပေးလျှင် သာ. မင်္ဂလာတော်မူသည် - "ကပိရမစ်အစီအစဉ်နဲ့တူရဲ့။ ဒီလူဟာလောကဤလောကရှိလျှင်, သူတို့သည်ထောင်ထဲတက်အဆုံးသတ်လိမ့်မယ်။ ပိရမစ်အစီအစဉ်များ။ ထိပ်သောသူသည်နှင့်အလွန်သန့်ရှင်းသောဖြစ်ဟန်သောသူအဘယ်သူအသံကျယ်စကားပြောခဲ့သည်။ မိမိအအိတ်ကပ်ကျပ်မှီတိုင်အောင်လူရာပေါင်းများစွာအထိရောက်လာတယ်။ ဆိုးသောသူတို့ကဤအခမဲ့ယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရားဖြစ်ပါတယ် "ဟုဆိုသနညျး ငွေစက္ကူတွေ? "
ကပြောသည်ခဲ့ရာမှနားထောင်ပါ။ အဆိုပါပီထဆိုသည်ကား, သင်ကယူရမယ်ဒါ, လူမှုရေးအကူအညီများကိုသင်5ဒေါ်လာပေးသည်ကိုလက်ခံရရှိသူတစ်ဦးဆင်းရဲသောမုတ်ဆိုးမအကြောင်းကို, ဧလိယကမုဆိုးမရဲ့နောက်ဆုံးအစားအစာကိုယူ။ သင့်အနေနှင့်ဘိသိက်ခံ, သင်ကထိုက်, ယူနေကြသည်။ ငါ 1000 စတုရန်းပေအိမျ၌နထေိုငျ "တူညီသောစပီကာကပြောပါတယ်" ။ ယခုတွင်ငါသည်ပိုကြီးတည်ဆောက်ပါလိမ့်မယ်။ ရှောလမုန်မင်းကြီး၏မာနထောင်လွှားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တစ်ခုမှာ။ ကျွန်မခွေးသည်ပဲ 15000 သည်အမေရိကန်ဒေါ်လာပေးဆောင်။ သငျသညျအကြှနျုပျ၏လက်ချောင်းပေါ်တွင်ခမ်းနားလက်စွပ်ကိုမြင်ရပါနဲ့, ကိုယ့်ဂျမေကာမှာရှိတဲ့မကြာသေးမီကကြီးက 32,000 ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာပေးဆောင်။ ငါသည်သင်တို့ကိုလူတွေဘယ်မှာငါသည်ငါ့အိမ်ကြီးအတိတ်ပြေးနေသောအခါသင်တို့သိရနှင့်ခြံဝင်းသို့ဝင်၌ငါ့ Rolls-Royce မြင်ချင်, ဒါကြောင့်သူတို့တစ်တွေဘုရားသခငျသညျကောငျးကငျဘုံ၌ရှိကြောင်းကိုငါသိ၏။ "
ဧဝံဂေလိတရားကိုဖြစ်ပါသည်, ငါ့ကိုပြောပြပါ? ငါ့ကိုပြောပြပါဒါကြောင့်ကိုကျော်မငို?
အဆိုပါစပီတစ်ခုမှာတက်ရပ်ကိုကျနော်တို့လာမယ့်နှစ်အတွင်း, ကျွန်တော်တို့ကိုအဘယ်သူအားမျှတနေ့ဆင်းရဲခံရသောညီအစျကို Copeland နှင့်ပဋိညာဉ်ဖွဲ့ခဲ့ကြ "ဟုပြောသည်။ ကျနော်တို့စိတ်ဓာတ်၏တခဏမခံစားရသင့်တယ်။ ကျနော်တို့နေမကောင်း get သို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကိုမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားသင့်ပါတယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ဘဏ္ဍာရေးပြဿနာများ, အားလုံးနာကျင်မှုအားလုံးဆင်းရဲဒုက္ခငြင်းပယ်။ " သငျသညျထိပ်ပေါ်မှာရှိပါတယ်လျှင်ကောင်းသောအသံ။
ဤသည်အဘယ်အရာကိုအများဆုံးအကြှနျုပျကိုဝမျးနညျး။ ဒါကတရားကိုဟောပြောခဲ့သည်။ သင်ပိုက်ဆံစီးဆင်းမှု၌ရှိကြ၏သည်အထိ "သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့အပေါ်သို့သွန်းလောင်းမရနိုင်ပါ။ သငျသညျသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ဘာမှလုပ်မထားဘူးနိုင်ပါတယ်အောင်မြင်သောဖြစ်ကြောင်းမီ။ "
အဲဒီအကြောင်းစဉ်းစားကြည့်ပါ ဘယ်လိုဤသူသည်သင်တို့ကိုအကျိုးသက်ရောက်သနည်း? သင်သည်အဘယ်သို့လက်မှပါးစပ်အသက်ရှင်သောဆင်းရဲသားကိုမြင်သောအခါသင်တို့၏စိတ်ဝိညာဉ်ထဲတွင်စေသည်များနှင့်ရုတ်တရက်သူက "ပိုက်ဆံရှာ 'ကဤသို့ဆို၏နှင့်အရူးကဲ့သို့ပြေးလူများနှင့်သူတို့ run တဲ့အခါမှာသူတို့က" ကျနော်တို့စည်းစိမ်ကိုအခိုင်အမာပြောဆိုသည်။ "ကျနော်တို့ပြောပါ
ထိုအခါငါကလူကသူတို့ကုလားထိုင်ထဲကနှင့်ကြမ်းပြင်ပေါ်ကိုမြွေနဲ့တူတွားကြည့်ပါ။ ငါသာသနာပွုဆရာထရပ်များနှင့်မြွေများနှင့်နေရာတိုင်းကျသွားလူတွေနဲ့တူကဲ့ရဲ့သံကိုပြုကြည့်ပါ။ အဘယ်သူငယ်ချင်းများသွားသလဲ?
högtidsförsamligen၏အရှက်! တမန်တော်မြတ် "လောဘကြီးခွေး, တရားမဲ့ကင်းစောင့်တို့သည်" သူတို့ကိုခေါ်။ သငျသညျဘုရားသခငျ၏နှလုံးခဲ့နှင့်သခင်ရဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲသငျသညျဟရှောယကနှင့်အတူအော်ဟစ်မယ်ဆိုရင်သူငယ်ချင်းများ, သူတို့မျက်စိကန်းသောကငျးစောငျ့အရာကိုမသိဘဲနေ, စကားမပြောနိုင်သောခွေး, အိပ်, အိပ်မေတ္တာရှင်, အလုံအလောက်ရှိတယ်ဘယ်တော့မှနိုငျသောလောဘခွေးဖြစ်ကြ၏။
"ငါသည် 1000 စတုရန်းမီတာရှိပေမယ့်ကိုယ်ကမရောင်းပါလိမ့်မယ်, ငါရှောလမုန်မင်းကြီး in- အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်မယ့်အိမ်ကိုတည်ဆောက်လိမ့်မည်" အလုံအလောက်ရဖို့ဘယ်တော့မှရန်။ သူကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်များကိုရရှိရန်နားမလည်နိုင်သောချင်းသိုးထိန်းတို့, လူတိုင်းသူမကိုရှာဖွေနေသည်ဘာမှတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး "ဟုပြောသည်။ ယေရမိကမျှစကားများနှမြော။ သူဟာငါ၏လူပျောက်သောသိုးကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ "ဟုပြောသည်။ ။ သူတို့ရဲ့သိုးထိန်းတို့ကသူတို့ကိုလမ်းလွဲမသွားစေကြပြီ "သင်ဆိုသညျကား," သင်းအုပ်ဆရာ, သင်သည်ဤဘာသာရပ်နှင့် ပတ်သက်. ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောဆိုရန်အဘယ်သူမျှမပိုင်ခွင့်ရှိသည် "သင်ငါချွန်ထက်တယ်ထင်လျှင်, ယေဇကျေလ 34 ကိုဖတ်ပါ။ 1-10 ။
သင်ကမုဆိုးမထံမှသန်း 50 ကို ယူ. SEK 150 000 များအတွက်ခွေးဝယ်ယူ။ သင်ကမုဆိုးမထံမှအငြိမ်းစားနှင့်ဆင်းရဲသော ယူ. , သငျသညျကိုသူတို့အလုံအလောက်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်မရှိကြပါဘူးသောသူတို့ကိုပြောပြ - သူတို့အောင်မြင်သောမဟုတ်လို့ပဲ။ သင့်အနေဖြင့်သိုးကနေသိုးမွှေးယူပါ။ သငျသညျပိုက်ဆံရှာဖွေနေ, အသက်ဝိညာဉ်ကိုရှာဖွေနေကြသည်မဟုတ်။ အဆိုပါအချင်းသိုးထိန်းသူတို့ကိုယ်သူတို့မသိုးစုကိုမွေးမြူရေးလုပ်နေကြရသော "ထို့ကြောင့်သင်သည်ချင်းသိုးထိန်းတို့, ထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုနားထောင်လော့။ ထို့ကြောင့်သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်, ငါသည်သိုးထိန်းတို့တဘက်၌ဖြစ်၏, ငါသည်လည်းသူတို့၏လက်မှသိုးစုကိုပြန်ဆပ်ပါလိမ့်မယ်, သူတို့ကနွားစာကျွေးဖို့ကိုရပ်တန့်ကြမည်ကိုကြည့်ပါ။ ငါသည်သူတို့၏ပါးစပ်ကနေသိုးစုကိုကယ်နှုတ်တော်မူပါလိမ့်မယ်, သူတို့မရှိတော့သူတို့၏အသားကိုဖြစ်ရလိမ့်မည်ဘို့မဟုတ်သလိုသူတို့တွေပိုပြီးသူတို့ကိုယ်သူတို့မွေးမြူရေးလုပ်နေကြရသောသငျ့သညျ။ "
ဒုတိယအမင်္ဂလာသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်၏ယိုယွင်းနေ။ ဒါဟာအဆိုးဆုံးအရှက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာငါတို့မျက်နှာများပေါ်တွင်လဲကျစေလိမ့်မယ်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်လောကဓာတ်လုံးကိုမှပုံပျက်လိမ့်မည်သည့်အတွက်အဆိုပါလမ်း။
ဒါဟာအသင်းတော်၌များစွာသောဓမ္မဆရာများနှင့်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များအကြားထွက်ခွာနိုင်အောင်နည်းနည်းပိုင်းခြားသိမြင်ရှိကွောငျးကိုသတိပြုပါရန်ညှိုးငယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ပုံပျက်သို့မဟုတ်ကဲ့ရဲ့သောအခါသူတို့ကပင်မသိကြပါ။ အဆိုပါပြန်လည်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုသွားနှင့်သူတို့သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ထဲကနေလာယုံကြည်မှုအရာတို့ကိုကြည့်ရှု, ဒါပေမယ့်သူတို့ကလက်ခံရရှိနေကြတယ်ဆိုတာကိုမသိသူကိုခရစ်ယာန်များ၏ထောင်ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့လက်ခုပ်တီးပြီးလူကိုပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ရပ်များနှင့်ဘုရားကိုလွန်ကျူးခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်အဓိပ္ပါယ်ကောက်လွဲမှားအောင်သည့်အခါဘုရားသခငျသညျခြီးမှမျးပါ, သူတို့ကအကြောင်းမသိရပါဘူး။
မှားယွင်းသော Revival အားဖြင့်ဆိတ်ကွယ်ရာကိုက်အမေရိကန် Pentecostal လှုပ်ရှားမှုအပါအဝင်တစ်ခုလုံးကို Charismatic ဂိုဏ်းဂဏ။ အရာအားလုံးအမြိုးမြိုးဖြစ်ပျက် - အသစ်သောအရာတစ်ခုခုနီးပါးအပတ်တိုင်း။ အဆိုပါခေါင်းဆောင်များကလက်ခံသို့မဟုတ်ကျိန်ဆဲစေခြင်းရှိမရှိမသိရပါဘူး။ သူတို့ကဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး။ ကျနော်တို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှဓမ္မဆရာများရာပေါင်းများစွာကနေစာလုံးတွေရ။ သူတို့ကမေးကြတယ်။ "ဘာမှန်သည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်မှားသလဲ" ဟုအဆိုပါခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသည်ဘယ်မှာရှိသနည်း ကျွန်တော်တို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်သူတစ်စုံတစ်ဦးကိုအဘယ်မှာရှိသနည်း။
သူငယ်ချင်းများကျနော်တို့ Revival လို့ခေါ်ပါတယ်အဘယျသို့ယနေ့ဖြစ်ပျက်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ဖြစ်ပျက်နေသည်ကိုတွေ့မြင်သောအရာကိုကျနော်တို့ script ကိုများအတွက်အခြေခံကိုမတှေ့နိုငျပါသညျ။ ကျနော်တို့အညီကျမ်းစာလာသည်ကိုမတှေ့နိုငျသောအရာကိုမဆိုပယ်ချရမည်ဖြစ်သည်။ လုံးဝပယ်ချ!
ငါကလူနိုင်ငံအနှံ့မှငါ့ကိုပေးပို့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း, ဤဗီဒီယိုများကြည့်ရှုသောအခါငါငိုတယ်။ ထိန်းချုပ်မှုများထဲကတစျခုလုံးတှငျအသငျးတျော, တောသားရဲများကဲ့သို့မြည်, မြွေကဲ့သို့အလိမ်, ယစ်မူးသောသူကဲ့သို့န်းကျင်ခွား, ခြောကျခြားဖွစျပွီးရယ်မော, ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာပြုတ်ကျ။ ကျနော်တို့ညျသနျ့ရှငျးသောဝိညာဉျတျောကိုယျတျောကိုခံပြီးခဲ့ကြသည်လျှင်သကဲ့သို့ထိုသူတို့ကိုငါဆုံးကြရ, လူများပေါ်တက်ရပ်နေသောသာသနာပြုအရာ၌နဲ့ရိုက်ရှိသည်။ ကလူမှာက၎င်း၏အမှတ်တံဆိပ်ဂျာကင်အင်္ကျီပျော်စေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ် "သခင်ရဲ့လက်ကို။ "
အသစ်သောဧဝံဂေလိတရားရုံအမေရိကရောက်လေပြီ။ သူငယ်ချင်းများကြောင့်ကြမ်းတမ်းခြင်းနှင့်ကုန်ကြမ်းရဲ့, ဒါပေမယ့်ငါသည်သင်တို့ကိုပြောပြပါ။ သငျသညျနှုတ်ကပတ်တော် parameter သည်စွန့်ခွာရတဲ့အခါသင်ပြောသည့်အခါ: "ဒါကအသစ်သောအရာတစ်ခုခုသည်ဘုရားသခင့အသစ်သောအရာတစ်ခုခုလုပ်နေသလဲ? ငါကစာအရေးအသားအတွက်မဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားခုခံတွန်းလှန်ချင်ကြပါဘူး, ကနားမလည်ကြဘူး။ "
ကကျမ်းစာထဲမှာမပါလျှင်သူငယ်ချင်းများ, ကျွန်တော်ခုခံတွန်းလှန်ရမည်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ်သင်အနည်းငယ်ကလေးကမကြိုက်ကြဘူးလျှင်သင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ဝင်မရနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ လူတွေကသူတို့အစည်းအဝေးများကာလအတွင်း၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်လုပ်နိုင်အောင်အနှီးကိုဝတ်ဆင်လာကြ၏။ ဒါဟာနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေများ, ဘယ်မှာအဆုံးသတ်ကြမည်နည်း
တစ်ဦးကသင်းအုပ်ဆရာ said: "ဒါဟာတနေ့တစ်ဦးဧဝံဂေလိဆရာထရပ်များနှင့်ငါသည်ထာဝရဘုရားကနေဗျာဒိတ်တော်ရရှိထားဟု, ကမာရိသညျကိုးကှယျစတင်ရန်အချိန်ဖြစ်တယ်, ဒါဝေးသွားပြီ။ " ဒါဟာရှိရာအမှတ်သွားရလိမ့်မယ်။
နောက်ထပ်ဧဝံဂေလိဆရာသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျော်ယမကာစပ်သူ့ကိုယ်သူခေါ်ဆိုသည်။ သူက "သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်၏အဘားနှင့်သောက်ရန်လာကြ။ " ဟုဆို သူတို့စပျစ်ရည်သစ်၏သောက်စရာကကိုခေါ်ပါ။ ငါတရားရုံးနှင့်ယဇ်ပလ္လင်အကြားငိုကြွေး, ငါ့နား၌အူညျပရောဖကျရဲ့စကား, "သခင်ဘုရား၏နေ့ရက်သည်ဤနေရာတွင်ဖြစ်ပါသည်, မကောင်းသောအအောငျနိုငျနားထောင်ကြလော့။ အဝတ်များ၏အိတ်ပေါ်ထားပါ။ Fixed နှင့်ပြိုလဲလူတို့အဘို့စိတ်မနာစေ။ "
ယရှေုသညျကွှလာပါလိမ့်မယ်။ ထုနေဆဲလက်လှမ်းမမှီပါဖြစ်ကြသည်။ ငါခရစ်ယာန်တွေကိုသူတို့ကသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ဘားခေါ်ကိုသွားမြင်သောအခါ, ယစ်မူးသောသူကဲ့သို့တုန်လှုပ်စေသောငါ့အားယောလရဲ့စကားရှင်းရှင်းလင်းလင်း, လိမ့်မည် "နိုးစပါးရိတ်ရာကာလကိုလယ်ပျက်သောကြောင့်, သငျသညျသစ်ကိုစပျစ်ရည်ကိုမသောက်ရသောသူသည်သင်တို့အပေါင်း၌, အရက်မူးဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ငိုရမည်။ "
ထောင်ပေါင်းများစွာ၏အသက်ဝိညာဉ်ကိုအသေခံ, ဒါကြောင့်သင်မှာအဘယ်အရာကိုရယ်မောနေကြသနည်း သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်သည်မြေကြီးပေါ်မှာနေရာတိုင်းအလုပ်လုပ်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်။ သငျသညျအမြားဆုံးဆင်း, ညစ်သောနေရာများမှယူနိုင်ခဲ့ဖြစ်ရမည်။ သင့်အနေဖြင့်ဆင်းရဲသောနိုင်ငံများကယူနိုင်ခဲ့ဖြစ်ရမည်။ သငျသညျလူသား၏ချေးဖို့ကယူရမယ်, ထိုသို့အဲဒီမှာအလုပ်လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာကြွယ်ဝသော America မှာသာအလုပ်လုပ်လို့မရပါဘူး။ ဒါဟာမွကွေီးပျေါမှာနေရာတိုင်းလုပ်ကိုင်ဖို့ရှိပါတယ်။
ကျွန်မဤလူယခုအခါဘော်လကန်သို့သူတို့ရဲ့ရယ်မောယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရားကိုယူမှစိန်ခေါ်။ သူတို့ရဲ့ယောက်ျားပစ်ခတ်ခဲ့ကြသောကြောင့်, မိန်းမများငိုရှိရာဒုက္ခသည်စခန်းများသို့သွားပါ။ သူတို့သမီးမုဒိမ်းကျင့်ခံခဲ့ရပြီ။ သူတို့သားသမီးဆာလောင်မွတ်သိပ်ဖြစ်ကြသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သူတို့ကိုရယ်မောဖို့လိုလား - သူတို့ကဒါဘားကိုသွားသူတို့ကိုမမေး, ၎င်းတို့၏နေအိမ်များဆုံးရှုံးခဲ့ရပါပြီ။ ဒီနွေရာသီ Madison Square Garden မှလာမယ့်ဒါကဒါခေါ်ပြန်လည်ရှင်သန်မှု။ သငျသညျ, သင်အဘို့ဓမ္မစည်းဝေး၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး script ကိုသယ်ဆောင်နေကြနိုင်လျှင်သင်မည်သို့ထိုကဲ့သို့သောအယူဝါဒကိုတက်ယူဖို့ဆန္ဒရှိပါလိမ့်မယ်။
ငါ့ကိုအဘယ်သူသည်ရယ်မောင့်ကိုသင်ပြောပြပါရစေ။ ကမ္ဘာ့ဖလား။ အဓမ္မတပါးအမျိုးသားတို့သည်။ ဒါဟာမျက်မှောက်၌ပွဲဝင်သောဖြစ်လာသည်။ ယေရှုခရစ်၏ဘုရားကျောင်းဆုတောင်းပဌနာ၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုဗီရိုထဲမှာပိတ်မိနေရပါမည်သည့်အခါခရစ်တော်၏ကြွလာရန်နိုင်အောင်နှင့်နီးစပ်သူတစ်ဦးအချိန်ပါ။ ပျောက်ငိုကြွေးသင့်ပါတယ်အခါ။ ကအားလုံးကိုစှနျ့ပစျနှငျ့ယရှေုကိုလိုက်နာဖို့လိုဆန္ဒရှိသည်မယ်လို့အခါ။ အခါဒေါ်လာစျေးဥပဒေကြမ်းဖော်ပြခဲ့တဲ့ရပါမည်အစဉ်အဆက်။ အမေရိကန်ဘုရား။ အမေရိကန် avgudadyrkandet ။ ကမ္ဘာ့ဖလားဒီရူးသွပ်မှုကိုကြည့်နှငျ့သငျသူတို့ထင်အရာကိုသိ - သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တစ်ဦး ringmaster ကြောင်း။ ဒါဟာသြဇာဆပ်ကပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ငါကလူတော့ဘူးထင်သောအရာကိုဂရုမစိုက်ကြဘူး။ ကလူတော့ဘူးသတင်းလွှာချင်ကြဘူးလျှင်ငါဂရုမစိုက်ပါဘူး။ ငါသည်သူတို့၏အသက်ဝိညာဉ်များနှင့်ဤမျှလောက်များစွာသောမြင်နိုင်ကြသည်ဟူသောအချက်ကိုဂရုစိုက်။ ငါသူအစေခံရန်ငါ့ကိုခေါ်တော်မူကြောင်းကိုပရိသတ်ရှေ့မှာမတ်တပ်ရပ်ပေးဖို့ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌တခုတာဝန်ရှိသည်, သငျသညျသတိပေးနှင့်ဓမ္မဘုရားကျောင်းဤကဲ့ရဲ့ခြင်းသည်ဟုဆိုခြင်း, ကမျြးစာကိုသင်ကျော်ငိုကြွေးမြည်တမ်းရကြလိမ့်မည်ကပြောပါတယ်။ အကွီးအကဲမြားပေးပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဘုရားကျောင်း, သင်းအုပ်ဆရာ, ကျွန်တို့က, ဧဝံဂလေိ။ ကျနော်တို့ကဤရဲတိုက်ကိုဆင်း၌ဆုတောငျးလရပါမည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ညီလာခံ demoralization သိမ်ငယ်အောင်၏ကဲ့ရဲ့။ မှောင်မိုက်အလင်းနှင့်မီးထွန်းစရာဘို့မှောင်မိုက်ကိုခေါ်ဆိုကြောင်း - မကောင်းသောအကောင်းနဲ့အကောင်းဆိုးယုတ်သောပဌနာပွုသောသူတို့အဖို့မင်္ဂလာရှိ၏။ ဒါကြောင့်ခါးသီးချိုမြိန်မွှေးခါးသောစေသည်။ (ယေ 23:15) ။ ငါသည်ပရောဖက်တို့၌အတွက်ကြောက်မက်ဘွယ်သောအမှုအရာမြင်ကြပြီ။ သူတို့ဟာသူတို့မုသာ, မတရားသောလက်ဖြင့်သက်သေအထောက်အထားများနှင့်မကောင်းသောအဘယ်သူမျှမပြန်လာ၌ကျင်လည်, မျောက်။
ငါအမျက်ပြင်းထန်သောခရစ်ယာန်အမျိုးသမီးတစ်ဦးထံမှစာတစ်စောင်ယခုအပတ်လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ သူမသည် "ခရစ်ယာန်တစ်ဦးသည်ကိုယ်တိုင်ခေါ်တော်မူသောသူအကြှနျုပျ၏ခင်ပွန်း, ကြီးစွာသောကစားသမားဖြစ်ပါသည်, သူသန်းပေါင်းများစွာတို့အတွက်ကစား" ဟုပြောသည်။ သူမသည် "ငါသည်အန္တရာယ်များနှင့်သူရှိပြီးသောကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုဤမျှစိုးရိမ်နေပါတယ်" ဟုပြောသည်။ ငါ "ငါသင်းအုပ်ဆရာသှားဖို့သူ့ကိုမေးကြည့်ပါ။ " ကျွန်တော်ထင်
သူမသည်ညီအစျကို Wilkerson ငါဒါကိုထိခိုက်စေ, အမျက်ထွက်ခြင်းနှင့်ရှုပ်ထွေးတယ်, သင်ဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့မသိရပါဘူး "ဟုပြောသည်။ ကျနော်တို့သင်းအုပ်ဆရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Multi-သန်းလောင်းကစားဝိုင်းခင်ပွန်းစေလွှတ်ခဲ့သည်။ "
သူကကျွန်မ 1 ကမ်ဘာဦးမှဗျာဒိတ်ကျမ်းကျမ်းစာလာသည်ကိုရှာဖွေကြပါပြီ, ငါလောင်းကစားဆန့်ကျင်ဟောပြောသောအညီကျမ်းစာလာသည်ဘာမှမတှေ့နိုငျ "ဟုပြောသည်။ ငါက၌လည်းအပြစ်မရှိတွေ့မြင်ဒါကြောင့်ပျော်စရာရှိသည်။ "သူကရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်," ဘယ်လိုလုပ်နိုင်ဘုရားသခင်၏လူတယောက်ကျွန်မခင်ပွန်းမှထိုသို့သောအမှုကိုအပြော? "
ဤသည်ယေရမိကဆိုပါတယ်အတိအကျကဘာလဲ "ဓမ္မဆရာများလူဆိုးတို့သည်လက်သက်သေအဘယ်သူမျှမသူ၏ဒုစရိုက်အပြစ်ကနေပြန်လှည့်။ " သူတို့ညီလာခံ demoralization နှင့်အဘယ်ကြောင့်သူတို့သည်မကောင်းသောအကောင်းနှင့်အကောင်းကိုမကောင်းနှင့်ခါးသောခါးသောချိုမြိန်မွှေးကိုခေါ်ဒီစာအုပ်ကိုအထင်သေးကြပါပြီဘာလို့သူကရှင်းပြသည်။
သူက "အနာဂတ္တိကျမ်းအိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ကျူးလွန်ခြင်း, မုသာ၌ကျင်လည်ကြပါပြီ" ဟုပြောသည်။ သူ၏အသက်တာတွင်အပြစ်တရားရှိပြီးသူမည်သူမဆိုတပ်၌ထရပ်နှင့်အပြစ်အကြောင်းကိုမပြောပါလိမ့်မယ်။ သူကသူ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်, မိမိအပွစျနှငျ့သူ့ကိုယ်ပိုင်မကောင်းသောအစိတ်ယုံကြည်တယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ငါဖြီးကျော်တိုင်းပြည်တွင်မဆိုအစေခံကျွန်ဆွဲကြဘူး။ ဘုရားသခင်အဘို့ကျွန်တို့သည်မီးအများစု။ ဤဆိုးသောအသက်အရွယ်အတွက်ကိုစင်ကြယ်စေကြသူငယ်ရွယ်အစေခံကျွန်ရှိပါသည်။ သူတို့ကိုငါအများအပြားတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးသူတို့အဘို့ငါသညျဘုရားသခငျကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တောင်မှဤမြို့၌ငါတစျခုလုံးကိုအသက်တာ၌တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့အရှိဆုံးဖြောင့်မတ်တရားဟောဆရာအချို့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပါပြီ။
ငါနှင့်အတူအကျွန်တို့ရမှတ်ဟာဝမ်းနည်းပူဆွေးခံစားရသူတို့ရှာဖွေနေခြင်းနှင့်ဘေးဥပဒ်သည်အဘယ်အရာကိုဖျောပွနိုငျသောစကားသံများကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။ "သူတို့ငါ့တန်တိုင်း၌ရပ်လျက်နှင့်ငါ၏လူတို့သည်ငါ့စကားကိုနားထောငျဖို့တယ်လျှင် - သူတို့သည်ငါ၏နှလုံး၌အဘယျပြောပြီခဲ့လျှင်။ ထိုသူတို့သည်ဘုရားသခင်၏စိတ်တော်ကိုကနေပြောပြီဖူးဆိုရင်သူတို့ပျောက်သူတို့ရဲ့မကောင်းသောအနည်းလမ်းတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မကောင်းသောအကျင့်ကိုမှလူလှည့်ကြလိမ့်မယ်။ "
သင်တစ်ဦးသောသူသည်ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်အခြားအကြောင်းကိုပြောပါတယ်သိတယ်လျှင်, "ငါကသူတို့ကိုစလှေတျတျောမလာကြသူတို့ကိုငါမှမဟော, သူတို့ကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးစိတ်သန်းထဲကပြောတွေ့မြင်နိုင်သည်။ သူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲ၌မကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးကိုထုတ်။
"သူတို့ကသူတို့ကိုငါမစေလွှတ်ဘဲသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နှလုံးထဲကရူပါရုံဟောပြောလော့။ သူတို့ကိုငါမှမဟောပါပွီ။ သူတို့က 'သင်ကငြိမ်းချမ်းရေးရကြလိမ့်မည်, အဆိုပါထာဝရဘုရားမိနျ့တျောမူ' ငါ့ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုသောသူတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ, သူတို့သည်မိမိနှလုံးကိုပြီးနောက်သွားလာနှင့်သူ၏ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးယဉ်တတ်သောသူအပေါင်းတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ '' အဘယ်သူမျှမကိုမကောင်းသောအသင်တို့အပေါ်၌ရောက်လိမ့်မည်။ '' ' အဆိုပါအဘို့ဓမ္မစည်းဝေးရန်ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခရစ်တော်နှင့်သူ့ဘုရားကျောင်းကိုချစ်သောသူအပေါင်းတို့သည်သူတို့အဘို့အကြီးမြတ်ဆုံးဝမ်းနည်းခြင်းပါလိမ့်မယ်။ သူ၏နာမနှင့်သူ့အသငျးတျော၏ကဲ့ရဲ့စရာ - ဤသူတို့၏စိတ်နှလုံး၌ သာ. ကြီးမြတ်သည်ဝမ်းနည်းခြင်းပါလိမ့်မယ်။ ပြည်နယ်ညီလာခံကျော်ငို။ သင်တစ်ဦးရပျတညျတဲ့အခါမှာ, သင်ပြုသောပဌနာခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်အကြောင်း, သခင်ရဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုယူသောအခါ။ ဘုရားသခငျသညျအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကလေးကဤသည်၌ဖမ်းမိထားသူအပေါငျးတို့သလွတ်မြောက်လာခံရဖို့ဆုတောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျသိချင်စိတ်ထဲကအဲဒီမှာသွားလျှင်ကအားလုံးကိုသောဇာတိပကတိ၏အဖြစ်ပါသည်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့အတွက်အဘို့, သင်ဘမ်းမိပါလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်အနီးမသွားဘူး, ကမထိပါစေနဲ့။
သငျသညျသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်၌သင်တို့၏အသားနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဒါကြောင့်ကွာကနေနေဖို့ဘယ်လိုသိအထိပါပဲ။ ယေရမိကသင့်အလယ်၌အဆိုပါသင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်တန်ခိုးနှင့်ပြည့် "ဟုပြောသည်။ သူသီချင်းဆိုလျက်သင်၌ဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်, ကယ်တင်မည်။ သူကသူ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကျိန်းဝပ်မည်ဖြစ်သည်။ သူကသီချင်းဆိုခြင်းနှင့်တကွသင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော့လိမ့်မည်။ "
အဘယ်ကြောင့်နည်း သူကသူ့နှလုံးဝမျးနညျးအဘယ်အရာကိုကျော်စိတ်မနာစေသူတစ်ဦးကလူကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူသည်တရားဝင်မြို့နယ်များ၏ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုသယ်ဆောင်သည့်ဝန်တင်ဆောင်။
ဒါက "မေတ္တာထောင်ချောက်" ဖြစ်လိမ့်မည်။ သငျသညျနားထောငျပါလိမ့်မယ်။ "ကျနော်တို့ကလူတိုင်းချစ်ကြတယ်။ သငျသညျတရားကိုဟောပြောသောအရာကိုဒါဟာအရေးမထားဘူး။ သင်အောင်မြင်လျှင်ဒါဟာအရေးမထားဘူး။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရားသည်အဘယ်အရာအရေးမပါဘူး - သို့မဟုတ်အရာအားလုံးထက်။ ရဲ့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကြီးမားတဲ့ပွေ့ဖက်ပေးပါကြပါစို့။ "ဘယ်လိုနှစ်ခုသဘောတူခြင်းမရှိဘဲအတူတကွလမ်းလျှောက်နိုင်ပါတယ်။ သင်ဘယ်လိုကြောင့်နှင့်အတူသွားလာနိုင်ပါတယ်သင်မပေးနိုင်, ကျမ်းစာနှင့်မညီအလေ့အထများတည်းဟူသောနှင့်အတူသဘောမတူပါဘူး။ ဒါဟာချစ်ခြင်းမေတ္တာထောင်ချောက်ဖြစ်တယ်။ သူတို့က "မည်သူမဆိုမစီရင်။ " ဟုပြော
သောကမျြးစာအဘယ်သို့မိန့်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာကျနော်တို့ကဖြောင့်မတ်တရားသဖြင့်စီရင်စစ်ကြောစီရင်တော်မူလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ သည်းခံခြင်းနှင့်အတူကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ကြိမ်းမောင်းစကား။ ငါကျောက်ပေါ်မှာရပ်နေတယ်တဲ့ဆပ်ပြာပန်းကန်ပေါ်တွင်မတ်တပ်ရပ်ကြဘူး။ ဘုရားသခငျသညျသငျသညျကယ်ဖို့ရပ်ကွက်ကြိုးစားနေသည်။
ယေရှုခရစ်၌ညျဘုရားသခငျ၏စည်းစိမ်ဥစ္စာကဘာလဲ? ဘုရားသခင့ငြိမ်းချမ်းရေးဘုရားသခငျ့ဉာဏျပညာ, သူ၏ခရစ်တော်၏, ခရစ်တော်၌ရှိသမျှကိုငါတို့ဥစ်စာဖြစ်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေများ, သတိနှင့်ကြဉ်ရှောင်! ထွက် Watch!
ငါသည်သင်တို့ကိုကြောက်လန့်ကြပြီလော သငျသညျထာဝရဘုရား၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးအပေါ်ယူဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဇာတိပကတိ၌ထိုသို့ပြုလို့မရပါဘူး။ ဘုရားသခင်နှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ပါ။
အဆိုပါအချိန်အဘို့ဓမ္မစည်းဝေးဖုန်းခေါ်ရောက်လေပြီ။ သင်သည်သင်၏အိမ်သူအိမ်သားများထဲကသူတို့ကိုပစ်ဤတိပ်ခွေသို့မဟုတ်စာအုပ်တွေမဆိုရှိပါက။ အဝေးတို့အားပေး, သူတို့ကိုရှို့မထားပါနဲ့။ တစ်စုံတစ်ဦးကထိုအအစည်းအဝေးများ join ဖို့သငျသညျဖိတျချေါထားပါလျှင်ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး "ဟုပြောဖြစ်လျှင်, ငါစကားလုံးများ၏ငတ်ခံရဖို့မလိုချင်ကြဘူးငါ့နှလုံးအခြောက်နှင့်အညှိုးနွမ်းချင်ကြဘူး။ ငါကြီးထွားဖို့ခွင့်ပြုခဲ့သောထာဝရဘုရားထံတော်မှစင်ကြယ်သောစကားလုံးချင်တယ်။ ငါသည်ငါ့ဇာတိပကတိ၌စိတျဝငျစားဆိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုမလိုချင်ကြဘူး, ဒါမှမဟုတ်ငါ့နှလုံး၌လောဘဖန်တီးပါ။ "
ဘုရားသခငျသညျကြှနျုပျတို့လိုရာနှငျ့ကိုထောက်ပံ့ပေးသူအံ့ဘွယ်သောအမှုမ, ဒါပေမယ့်သူကသူ့ကိုယ်ပိုင်လမ်းအတွက်ကြောင့်ပါပဲ။ မဟုတ်သမ္မာကျမ်း misappropriating နှင့်တလွဲဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကစာဖတ်သူအီးမေးလ်ကဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးသူရဲ့အမြင် Apg29 အတိုကောက်အဘယျသို့မဟုတ်သေချာပေါက်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
Vecka 29, söndag 25 juli 2021 kl. 04:03